INdibano yeBhodi yeSekethe - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Oyena Mvelisi weNdibano yeBhodi yeSekethe- PCBFuture
Yintoni indibano yebhodi yesiphaluka?
Indibano yebhodi yesekethe ibhekiselele ekuhlanganiseni i-PCB engenanto kunye nezixhobo ze-elektroniki ezisebenzayo kunye ne-passive, ezifana ne-resistators, i-SMD capacitors, i-transistors, i-transformers, i-diodes, i-ICs, njl. iteknoloji)).
Indibano yebhodi yesekethe okanye i-soldering yamacandelo e-elektroniki inokwenziwa ngeendlela ezizenzekelayo ze-soldering ezifana ne-wave soldering (ye-soldering components) okanye i-reflow soldering (kumacandelo e-SMD), okanye nge-soldering manual.Nje ukuba zonke izinto ze-elektroniki zidityanisiwe okanye zithengiswe kwi-PCB engenanto, ibizwa ngokuba yindibano yebhodi yesekethe.
Kutheni ukhetha inkonzo yethu yesiphaluka-ibhodi-yendibano?
Abathengi abaphambili bePCBFuture bavela kubakhiqizi abaphakathi kwiinkalo zei-elektroniki yabathengi, iimveliso zedijithali, unxibelelwano lwee-wireless, ulawulo lwamashishini kunye ne-automation, unyango lwezonyango, njl. Isiseko sethu sabathengi esiqinileyo sibonelela ngamandla ophuhliso lwenkampani kwixesha elizayo.
1.Quick Turn prototype kunye ne-PCB yokuvelisa ngobuninzi
Sizinikezele ekuveliseni i-1-28layer ekhawulezayo yokujika, iprototype kunye nemveliso yobuninzi bePCB ezichanekileyo ezinomgaqo "Owona mgangatho uphezulu, ixabiso eliphantsi kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza"
2.Onamandla okuvelisa i-OEM
izixhobo zethu zokuvelisa ziquka iindibano zocweyo ezicocekileyo kunye nemigca emine ye-SMT ephucukileyo.Ukuchaneka kwethu kokubeka kunokufikelela kwi-chip + 0.1MM kwiingxenye zesekethe ezidibeneyo, oku kuthetha ukuba sinokuphatha phantse zonke iintlobo zeesekethe ezidibeneyo, ezifana ne-SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP kunye ne-BGA.Ukongeza, sinokubonelela ngokubekwa kwetshiphu ye-0201 ngomngxunya wamacandelo kunye nokuveliswa kweemveliso ezigqityiweyo.
3.Uzibophelele ekuphuculeni umgangatho wemveliso
Sizimisele ekuphuculeni umgangatho weePCBs.Umsebenzi wethu uphumelele i-ISO 9001: i-2000-eqinisekisiweyo, kwaye iimveliso zethu zifumene amanqaku e-CE kunye ne-RoHS.Ukongeza, sifaka isicelo sesiqinisekiso se-QS9000, i-SA8000.
4. Ngokuqhelekileyo 1 ~5 iintsuku zendibano yePCB kuphela;10 ~ 25 iintsuku ukuba turnkey PCB indibano.
Yeyiphi inkonzo esinokuthi siyibonelele ngePCBFuture:
1.Ÿ ITekhnoloji yoMphezulu weMount (SMT)
2.Ÿ Iteknoloji yeThru-Hole
3.Ÿ Khokela NgokukhululekileyoUkwenziwa kwePCB kunye nokudibanisa
Ÿ4.INdibano yePCB yomthwalo
Ÿ5.INdibano yeTekhnoloji eDityanisiweyo
6.Ÿ INdibano ye-BGA
7.ŸTurnkey PCB Assembly
9.Ÿ Ipakethe nolungiselelo kunye nenkonzo yasemva kwentengiso
Ÿ11.Uvavanyo lwe-X-reyi ye-AOI
Ÿ12.PCB unikezelo kunye noyilo
Amanye amacandelo asisiseko afunekayo kwi-circuit-board-assembly:
Ibhodi yesekethe eprintiweyo:Yeyona mfuno iphambili yenkqubo yendibano.
Izinto ezisisiseko ze-elektroniki:Kufuneka zonke iikhomponenti zombane ezifana transistors, diodes kunye resistors.
Izinto zokuwelda:Izinto eziphathekayo zibandakanya i-solder paste, i-solder bar kunye nocingo lwe-solder.Kufuneka kwakhona iibhola ze-solder kunye ne-solder.I-Flux yenye into ebalulekileyo yokuthambisa.
Izixhobo zokuwelda:Esi sixhobo sibandakanya umatshini we-wave soldering kunye nesikhululo se-soldering.Ukwafuna zonke izixhobo eziyimfuneko ze-SMT kunye ne-THT.
Ukuhlola kunye nezixhobo zovavanyo:Izinto zokuvavanya zibalulekile ekuhloleni ukusebenza kunye nokuthembeka kwendibano yebhodi yesekethe.
Ukutyhubela iminyaka, i-PCBFuture iqokelele inani elikhulu lemveliso ye-PCB, iMveliso kunye namava okulungisa ingxaki, kwaye ixhomekeke kula mava, ibonelela ngamaziko ophando lwezenzululwazi kunye nabathengi bamashishini amakhulu kunye naphakathi kunye noyilo lokumisa olunye, ukuwelda, kunye nokulungiswa kweempazamo. iibhodi eziprintiweyo eziphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu kwiisampuli ukuya kwiibhetshi Olu hlobo lwenkonzo lusetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo afana nonxibelelwano, i-aerospace kunye ne-aviation, i-IT, unyango lwezonyango, indalo, amandla ombane, kunye nezixhobo zokuvavanya ngokuchanekileyo.
1. Ngaba uyabonelela ngeendibano ezihambelana ne-RoHS?
Ewe.Sibonelela ngeendibano ezihambelana neRoHS.
2. Ngaba uyanikezela ngeenkonzo zovavanyo nokuhlola?
Ewe.Sinikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zovavanyo kunye neenkonzo zokuhlola.
3. Zeziphi iinkonzo ezahlukeneyo zovavanyo ozibonelayo?
Zonke ii-PCB ziyavavanywa kwaye zihlolwe kwinqanaba ngalinye lendibano.Amacandelo e-PCB avavanywa kwezi ntlobo zilandelayo:
Ÿ Uvavanyo lwe-X-reyi: olu vavanyo lwenziwa njengenxalenye yenkqubo yokudibanisa esemgangathweni yoluhlu lwegridi yebhola (BGA), i-Quad leadless (QFN) PCB, njl.
Ÿ Uvavanyo lomsebenzi: apha, sijonga umsebenzi kwiPCB.Oku kukuqinisekisa ukuba iPCB isebenza ngokweemfuno ezikhankanyiweyo zomthengi.
Ÿ UVavanyo lweSekethe: njengoko igama libonisa, olu vavanyo lwenziwa ukujonga ukuba kukho iziqhagamshelo ezingalunganga okanye ezimfutshane.
4. Zeziphi iinkonzo ezahlukeneyo zokuhlolwa kwendibano ezibonelelwa yiPCBFuture?
Senza uhlolo olunzulu lwamacandelo kunye nokusebenza kwawo kwi-PCB edibeneyo.Baphantsi koHlolo oluSebenzayo lwe-Optical (AOI).Oku kunceda ukuchonga, i-polarity, i-solder paste, amacandelo e-0201, kwaye ukuba nawaphi na amacandelo alahlekileyo.
5. Ngaba uyalunikeza naluphi na uncedo ngokunqumla inxalenye kunye nokutshintshwa?
Kwi-PCBFuture, senza uhlolisiso oluneenkcukacha kwiBhili yeMathiriyeli (BOM) kwaye sabelane ngoluhlu lwamacandelo asele ekhona nathi.Amaxesha amaninzi, la macandelo ngamacandelo asimahla okanye amaxabiso aphantsi.Ukongeza koku, iingcali zethu ziya kukunceda unciphise iindleko zokuvelisa ngokusebenzisa iindawo zethu zeendleko zasimahla.Isigqibo sokugqibela sihlala silele kuwe.
6. Ngaba uyanikezela ngenkxaso emva kweentengiso kwiindibano?
Ewe.Sinikezela ngenkxaso emva kokuthengisa kuzo zonke iindibano zePCB.Ukuba kukho umba kumsebenzi wethu, iingcali zethu ziya kuzivavanya kwaye zilungise, zilungise, okanye ziphinde zisebenze phezu kwazo ngokumisela unobangela wengxaki.Ngoluphi na uncedo, nceda uqhagamshelane nathi.
7. Ndingawangenisa njani amalungu eeodolo ezininzi?
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iodolo nganye mayifakwe kakuhle kunye nawo onke amacandelo afunekayo.Ukuba uthumela iinxalenye ezihambelanayo kuzo zombini iibhodi zeesekethe, nceda uqinisekise ukuba ubonelela nge-5% yeengxenye ezongezelelweyo kwindibano nganye.La malungu kufuneka aphawulwe ngokucacileyo ngesincamathelisi esichaza ezo ziqhelekileyo kuzo zombini izakhiwo.
8. Ndingafaka iiodolo ezininzi ngexesha elinye?
Ewe.Ungafaka iiodolo ezininzi ngexesha elinye.
9. Ndingawabonelela njani amacandelo endibano?
Unokubonelela ngamacandelo kwi-tray okanye isikhwama esiphawulwe ngokucacileyo ngeenombolo zeengxenye ezivela kwi-BOM yakho.Nceda uqaphele ukukhusela amacandelo ngexesha lokuhamba.Unokuqhagamshelana neengcali zethu ukuze uqonde indlela amacandelo anokunikezelwa ngayo.
10. Liliphi ixesha elimiselweyo lomyalelo wendibano yesiphaluka?
Amaxesha okukhokela kwiNdibano acatshulwe kumxhasi alibandakanyi ixesha eliphambili lokuthenga.Amaxesha okukhokela kumyalelo wendibano yebhodi yesekethe axhomekeke ngokupheleleyo kwixesha elifunekayo ukufumana inxalenye.Indibano iqala kuphela emva kokuba onke amacandelo akhoyo kwi-inventri.